Fomba loteria | Fikambanana fampiroboroboana ny kolontsaina Ota Ward
Ahoana ny fanofana trano>
Raha ny fahitana ny fisorohana ny aretina dia ny loteria ho an'ny mpangataka maro hangonina amin'ny toerana iray hatramin'ny faha-XNUMX martsa taona Reiwa dia hovaina amin'ny fomba loteria ankehitriny miorina amin'ny fangatahana mailaka sy ny loteria ataon'ny mpiasan'ny fikambanana. Manana anao aho.
Nohavaozina nanomboka tamin'ny 4 Aprily faha-4 taonan'ny Reiwa ny saram-pampiasana trano.Mankasitraka ny fahatakaranao sy ny fiaraha-miasa.
Fitsipika amin'ny loteria
Ny loteria dia avy amin'ny mpiasan'ny fikambananaLoteria mandeha ho azy mampiasa solosainaAvy eo, araho ny fomba etsy ambany.
Ny taratasy fangatahana alefa amin'ny alàlan'ny paositra dia isaina araka ny filaharan'ny daty voarain'ny mpiasa tsirairay avy.Raha tonga amin'ny andro iray ihany ny takelaka fangatahana marobe, dia isaina tsy ara-dalàna izy ireo.
Amin'ny fotoan'ny loteria, ny isan'ny fangatahana isaky ny efitrano dia voasoratra anaty solosaina ary atao loteria mandeha ho azy.
Raha misy ny daty tadiavina ao amin'ny takelaka fangatahana izay mifanaraka amin'ny isa nofidian'ny solosaina, dia handresy ianao, ary raha tsy misy izany dia holavina ianao.
Fenoy ny takiana ilaina amin'ny "endrika fangatahana loteria" isaky ny toerana ary alefaso (Tokony ho tonga amin'ny 7/1) Na amin'ny kaontera (9: 00-19: 00).
* Ny fangatahana fax dia tsy ho ekena noho ny loza mety hitranga amin'ny fandefasana diso.
* Azafady mangataka ao amin'ny toerana ampiasainao.
* Ny varavarankelin'ny Ota Civic Hall Aprico dia misokatra hatramin'ny 17:00.
* Ny Ota Ward Hall Aplico dia mihidy manomboka ny Janoary 2022 (Reiwa 4) ka hatramin'ny Febroary 1 (Reiwa 2023) noho ny asa fanorenana toy ny fanoherana ny horohoron-tany amin'ny valindrihana.
Taorian'ny nikatonan'ny tranombakoka, ny fotoana hanohizana ny fangatahana fampiasana trano aorian'ny martsa 2023 (Reiwa 5) diatsindrio etoZahao azafady.
* Ny Ota Citizen's Plaza dia hikatona manomboka ny martsa 2023 (Reiwa 5) ka hatramin'ny Aprily 3 (Reiwa 2024) (6 taona sy 4 volana) noho ny asa fanorenana toy ny fanoherana ny horohoron-tany amin'ny valindrihana.
Fangatahana fangatahana loteria
Fampiharana fangatahana (tsy maintsy ho tonga amin'ny 7/1)
Toerana alehan'ny fampiharana
To "charge lottery" Yubinbango144-0052
To "charge lottery" Yubinbango143-0024
2-10-1, Afovoany, Ota-ku, Tokyo
To "charge lottery"
Ny fampiharana loteria dia voafetra amin'ny safidy fahatelo.
Olona iray ihany no afaka mangataka hetsika iray (toy izany koa amin'ny hetsika ataon'ny vondrona maro).Raha mihoatra ny iray ny olona mangataka dia tsy mety ny valin'ny loteria sy ny fampiharana azy.
Tsy azonao atao ny mangataka ireo daty sy sokajy ampiasain'ny Ota Ward, ny Fikambanan'ny fampiroboroboana ny kolontsaina Ota Ward ary ny Ota Bunkanomori Management Council izay hampiasainao.Azafady mba jereo ny latabatra misy amin'ny volana voasaron'ny loteria etsy ambany alohan'ny hampiharana.
Ny anaran'ny mpikarakara / fikambanana, ny anaran'ny hetsika ary ny atiny dia tsy azo ovaina aorian'ny fampiharana.
Raha mampiasa hetsika izay mitabataba mafy ianao (amponga amponga Japoney, feon-gadona, zavamaneno varahina, sns.), Mety tsy ho afaka hirotsaka arakaraka ny efitrano ianao, koa mifandraisa anay azafady.
Atao toerana fandatsaham-bato ny Ota Citizen's Plaza mandritra ny fifidianana.Mariho fa miankina amin'ny toe-javatra, mety hangatahana ianao tsy hampiasa ny efitrano rehefa avy nanao famerenam-bola feno na dia aorian'ny fandoavam-bola aza. (Tanjona: efitrano kely, efitrano fampirantiana, gymnase)
Fampandrenesana ny valin'ny loteria
Na inona na inona valiny, ny valin'ny loteria dia halefa any amin'ny adiresin'ny mpangataka amin'ny andro loteria.
Raha mandresy ianao dia mandoa azafady eo am-baravarankelin'ny fisoratana anarana amin'ny daty voatondro.
* Raha te-hamindra ianao dia mifandraisa azafady isaky ny andro alohan'ny fe-potoana fandoavam-bola.
* Raha tsy atao amin'ny daty voatondro ny fandoavambola dia hofoanana izany.Misaotra anao noho ny fahazoanao mialoha.
Lasibatra amin'ny loteria amin'ny volana martsa (hatramin'ny 7 feb. 4 taona faha-6 an'i Reiwa)
Volana kendrena amin'ny loteria
Ho an'ny martsa 2023 (Reiwa 5)
Alarobia 4 martsa, taona faha-6 nanjakan'i Reiwa
Zoma 4 martsa faha-7 taonan'ny Reiwa 4 aprily taona faha-7 n'i Reiwa (talata)
Loteria solosaina Alarobia 4 martsa, taona faha-7 nanjakan'i Reiwa
Alarobia 4 martsa, taona faha-7 nanjakan'i Reiwa
Hatramin'ny XNUMX hariva
* Hikatona manomboka ny Martsa 2023 (Reiwa 5) ka hatramin’ny Aprily 3 (Reiwa 2024) (6 taona sy 4 volana) ny efitrano lehibe, efitrano kely ary efitrano fampirantiana noho ny asa fanorenana toy ny fanoherana ny horohoron-tany amin’ny valin-drihana.
* Raha te hampiasa an-tsokosoko ny efitrano fampirantiana (fampiasana ny fampirantiana) ianao dia miangavy anao hijery ny pejy topin'ny maso / fitaovana ao amin'ny efitrano fampirantiana.
Rindran-tsarimihetsika / fitaovan'ny efitrano fampirantiana
Hatramin'ny XNUMX ora hariva
* Ho an'ireo maniry hamindra vola
4 aprily taona faha-7 n'i Reiwa (talata)
Hatramin'ny 3 hariva
Tsy mahakasika Tsy mahakasika
* Nikatona ny efitrano lehibe, efitrano kely, efitrano fampirantiana ary studio A sy B nanomboka ny Janoary 2022 (Reiwa 4) ka hatramin'ny Febroary 1 (Reiwa 2023) noho ny asa fanorenana toy ny fanoherana ny horohoron-tany amin'ny valindrihana. ...
Ho an'ny martsa 2022 (Reiwa 4)
Efitra fanaovana asa-tanana
Fanambarana sy fandraisana ireo toerana banga amin'ny fangatahana amin'ny volana martsa
Ny fampahalalana banga aorian'ny loteria ho an'ny fangatahana volana martsa dia hapetraka ao amin'ny tranonkalantsika.
Raha mila vaovao farany hatramin'ny nanombohana ny fandraisana ireo toerana banga dia jereo ny Uguisu Net.
Daty famoahana fampahalalana misy
Aorian'ny Alakamisy 4 Oktobra, taona faha-7 an'i Reiwa Aorian'ny Alakamisy 4 Oktobra, taona faha-7 an'i Reiwa Aorian'ny Alakamisy 4 Oktobra, taona faha-7 an'i Reiwa
Fandraisana ireo toerana banga
Sabotsy 4 martsa, taona faha-7 nanjakan'i Reiwa
Manomboka amin'ny XNUMX maraina Sabotsy 4 martsa, taona faha-7 nanjakan'i Reiwa
Manomboka amin'ny XNUMX maraina
* Ny fandraisana ireo fotodrafitrasa banga dia ilaina amin'ny laharam-pahamehana.
* Tsy haverina esorina indray ny fanafoanana.
Lasibatra amin'ny loteria amin'ny volana feb
Rehefa haverina amin'ny Martsa 2023 (Reiwa 5) ny fangatahana fampiasana ny toerana aorian'ny nikatona ny tranombakoka,tsindrio etoZahao azafady.
Ho an'ny martsa 2022 (Reiwa 4) 4 Mey, taona faha-5 nanjakan'i Reiwa (Masoandro)
Alarobia 4 martsa, taona faha-6 nanjakan'i Reiwa 4 Mey, taona faha-6 nanjakan'i Reiwa (Masoandro)
Loteria solosaina 4 Febroary faha-6 taonan'ny Reiwa (Alatsinainy)
4 Febroary faha-6 taonan'ny Reiwa (Alatsinainy)
Ho an'ny martsa 2023 (Reiwa 5) 4 Mey, taona faha-5 nanjakan'i Reiwa (Masoandro)
Zoma 4 martsa faha-6 taonan'ny Reiwa
Taorian'ny talata 4 septambra taona faha-6 an'i Reiwa Taorian'ny talata 4 septambra taona faha-6 an'i Reiwa Taorian'ny talata 4 septambra taona faha-6 an'i Reiwa
Manomboka amin'ny XNUMX maraina 4 Febroary, taona faha-6 nanjakan'i Reiwa (Alakamisy)
Azafady mba jereo ny Uguisu Net raha mila fanazavana fanampiny.